XOG+SAWIRRO: Ruushka iyo Soomaaliya oo soo celinaya xariirkii ka dhaxeeyey, balan-na qaaday
September 17, 2019 NEWS 1
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Ruushka u fadhiya Soomaaliya, Mikhail Golovanov oo ay ka wada hadleen xoojinta xariirka labada dowladood.
Mikhail Golovanov oo Ra’iisul Wasaaraha uga mahad celiyay qaabilaadda ayaa sheegay in dowladda Ruushku ay xoojineyso xariirka kala dhexeeya Soomaaliya ayna dowladda ka taageereyso anmiga, dhaqaalaha iyo waxbarashada.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa dhankiisa caddeeyay in dowladda Soomaaliya ay adkeyneyso xariirka qotada dheer ee kala dhexeeyay dowladda Ruushka.
HoggaankaDowladda Soomaaliya ayaa xoogga saarey soo nooleynta iyo adkeynta xariirka kala dhexeeyay wadamada caalamka, si ummadda Soomaaliyeed ay u soo ceshato sharafta iyo karaamada ay ku laheyd fagaaraha caalamka.
Raysal wasare qayre ruush ku waku qaldamay. Maxa yelay wadani maaha. Wa nin gaalo mesha ken satay. Ayaguna u shaqeya. Marka waxa mesha ka baxay danti umadani lahayd. Dowlada rush ka way ka madax banan taha nato iyo dunida maraykan. Sadarted rushka wa waqti lobahan yaha. Somalida fursad aya halka ku gafay sa.
Madaxweyne Denni oo magaacabay wasiir cusub
DAAWO:Maxkamadd ku taala gudaha Puntland oo dil ku xukuntay qof haweenay ah
Puntland oo lagu wareejisay qalabka looga hortagayo Coronavirus
DEG DEG:Xiisad dagaal oo ka taagan jiida Tukaraq & Isgaadhsiinta oo hawada laga saaray
Mid kamid ah isimadda ugu miisaanka culus Puntland oo Hargeysa ku sugan
DAAWO: Ciidamo katirsanaa kuwa Puntland oo gadooday, shaaciyeyna in ay ku biireen DF Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo oo la hor istaagay qorshihiisii muddo kororsiga ahaa & Shirkii Villa Somalia oo lagu kala kacay
Dowladda Somalia oo dib u fasaxaysa duulimaadyada maxaliga ah
Dhimashada oo gaartay 78 qof & kiisas laga helay Somalia
DEG DEG: Aqalka Sare Soomaaliya oo tiraddiisa la kordhiyey & G. Banaadir oo matalaad helay.
Maxay tahay faa’iidada ugu jirta Somaliland kala dilista beelaha Buuhoodle & Abuurista colaad dhacda?
Ajaaniib ku sugan dalka oo laga helay cudurka Coronavirus
XOG: Somaliland miyey duulaan ku tahay deegaano cusub oo kuyaala Puntland, Maxaase keenay dhaqdhaqaaqa socda?
Ciidamada Xaftar oo laga qabsaday garoonka Tripoli
Madaxweyne Qoor Qoor oo war cusub kasoo saaray dhismaha dekadda Hobyo